ဆငျတုပျကှေးဖွဈပွီးကနျြခဲ့တဲ့ နာကငျြကိုကျခဲခွငျးတှကေို ဘယျလိုသကျသာအောငျလုပျမလဲ ? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
နာမညျကွီးပွီး မဖွဈဘူးရငျပဲခတျေမမီလောကျအောငျ ဒီနှဈမှာပျေါပွူလာအဖွဈဆုံးရောဂါ။ပျေါပွူလာဖွဈဆို ထိမိတဲ့သူတိုငျး ပုံကိုကရြော။အဆဈအမွဈတှကေိုကျခကျြဆိုတာ ပွောတောငျမပွတတျဘူးဆိုတာမြိုး။အဖြားကကသြှားရငျတောငျ အဆဈကိုကျတာလေးက Extension ဆှဲသေးတာ။ဆှဲခကျြကလဲ လကျရောခွထေောကျရောလနျပွီး ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါကိုယျမရပျနိုငျတဲ့အဖွဈ၊ရသေောကျဖို့တောငျလကျမမွှောကျနိုငျလောကျအောငျအထိ။ဟုတျပါတယျ၊၂၀၁၉ခုနှဈရဲ့ အကယျဒမီဆုရှငျ ဆငျတုပျကှေးပါ။ ဖွဈနတေဲ့အခြိနျမှာရော၊ပြောကျသှားတဲ့အခြိနျမှာပါ ကနျြရဈခဲ့တဲ့ကိုကျခဲခွငျးတှဟော သာမနျတုပျကှေးနဲ့မတူပဲအတေျာ့ကို ပွငျးထနျလှနျးလှပါတယျ။
ဒီတော့ ဆငျတုပျကှေးဖွဈပွီးကနျြရဈခဲ့တဲ့ နာကငျြကိုကျခဲခွငျးတှသေကျသာအောငျဘယျလိုလုပျမလဲ???
-ပါရာစီတမောကို တဈရကျလြှငျ ၅၀၀(သို့)၇၅၀ မီလီဂရမျကို (၆)နာရီခွားတဈကွိမျသောကျပေးနိုငျပါတယျ(ပါရာစီတမောနှငျ့မတညျ့တဲ့လူနာ၊အရကျအလှနျအကြှံသောကျသုံးသူနဲ့အသညျးရောဂါရှိသူတှမှောတော့ ဆရာဝနျနှငျ့ပွသပွီးမှသောကျသငျ့ပါတယျ)
-ပါရာစီတမောကို တဈရကျလြှငျ (၄၀၀၀)မီလီဂရမျထကျ ပိုမသောကျသငျ့ပါဘူး၊အသညျးအတှကျအန်တရာယျဖွဈစနေိုငျလို့ပါ။
-၎င်းငျးကိုတော့ အလှနျမပွငျးထနျသော ကိုကျခဲနာကငျြမှုတှမှောသောကျသုံးနိုငျပါတယျ။
-ဒီထဲကမှ ဥပမာအနနေဲ့ Ibuprofen ကို ၄၀၀(သို့)၆၀၀ မီလီဂရမျကို ၈နာရီခွားတဈကွိမျသောကျနိုငျပါတယျ။
-အကိုကျအခဲပြောကျဆေးမြားဟာ နှလုံးရောဂါရှိသူတှေ၊ကြောကျကပျပွဿနာရှိသူတှနေဲ့ ဆေးမတညျ့တဲ့သူတှမှော ဘေးထှကျပွဿနာတှဖွေဈပျေါတတျပါတယျ။
-၎င်းငျးတို့ဟာ အစာအိမျရောငျရမျးခွငျး၊အစာအိမျအနာဖွဈခွငျးစသညျ့ဆိုးကြိုးတှလေဲရှိတာကွောငျ့ အစာခံပွီးမှဆေးသောကျရပါမယျ၊အစာမရှိလြှငျ အကိုကျအခဲပြောကျဆေး မသောကျသငျ့ပါ။
-အထိုကျအလြောကျပွငျးထနျတဲ့ နာကငျြကိုကျခဲခွငျးတှမှော သုံးနိုငျပါတယျ။
-Opioid တှဟော နာကငျြကိုကျခဲမှုကိုအတျောလေးကိုသကျသာစနေိုငျတဲ့ဆေးကောငျးတဈမြိုးပဲဖွဈပါတယျ။
– ဆေးမှနျသမြှ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးမကငျးတာကွောငျ့ သတိထား၍တော့ သောကျသုံးသငျ့ပါတယျ။
-Tramadol ကို တဈရကျ ၅၀(သို့)၁၀၀ မီလီဂရမျကို (၆)နာရီခွားတဈခါသောကျနိုငျပါတယျ။
-codeine ကိုလဲတဈရကျလြှငျ ၃၀ မီလီဂရမျကို (၆)နာရီတဈခါသောကျနိုငျပါတယျ။
-Oxycodone ဆိုတဲ့ဆေးကိုလဲ တဈရကျလြှငျ ၁၀/၂၀ မီလီဂရမျကို ၁၂နာရီခွားသောကျနိုငျပါတယျ။
-ဒါကွောငျ့ဆရာဝနျမညှနျကွားပဲ ဝယျဖို့ကအလှနျခကျခဲတဲ့ဆေးတှဖွေဈတာကွောငျ့ ဆရာဝနျညှနျကွားမှသာ သောကျသုံးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ဒီဆေးလေးတှကေတော့ ဆငျတုပျကှေးဖွဈပွီးကနျြရဈတဲ့ နာကငျြကိုကျခဲမှုတှကေို သကျသာစနေိုငျတဲ့ဆေးဝါးမြားပဲဖွဈပါတယျ။
ဆင်တုပ်ကွေးဖြစ်ပြီးကျန်ခဲ့တဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတွေကို ဘယ်လိုသက်သာအောင်လုပ်မလဲ ?
နာမည်ကြီးပြီး မဖြစ်ဘူးရင်ပဲခေတ်မမီလောက်အောင် ဒီနှစ်မှာပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံးရောဂါ။ပေါ်ပြူလာဖြစ်ဆို ထိမိတဲ့သူတိုင်း ပုံကိုကျရော။အဆစ်အမြစ်တွေကိုက်ချက်ဆိုတာ ပြောတောင်မပြတတ်ဘူးဆိုတာမျိုး။အဖျားကကျသွားရင်တောင် အဆစ်ကိုက်တာလေးက Extension ဆွဲသေးတာ။ဆွဲချက်ကလဲ လက်ရောခြေထောက်ရောလန်ပြီး ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်မရပ်နိုင်တဲ့အဖြစ်၊ရေသောက်ဖို့တောင်လက်မမြှောက်နိုင်လောက်အောင်အထိ။ဟုတ်ပါတယ်၊၂၀၁၉ခုနှစ်ရဲ့ အကယ်ဒမီဆုရှင် ဆင်တုပ်ကွေးပါ။ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရော၊ပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပါ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ကိုက်ခဲခြင်းတွေဟာ သာမန်တုပ်ကွေးနဲ့မတူပဲအတော့်ကို ပြင်းထန်လွန်းလှပါတယ်။
ဒီတော့ ဆင်တုပ်ကွေးဖြစ်ပြီးကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတွေသက်သာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ???
-ပါရာစီတမောကို တစ်ရက်လျှင် ၅၀၀(သို့)၇၅၀ မီလီဂရမ်ကို (၆)နာရီခြားတစ်ကြိမ်သောက်ပေးနိုင်ပါတယ်(ပါရာစီတမောနှင့်မတည့်တဲ့လူနာ၊အရက်အလွန်အကျွံသောက်သုံးသူနဲ့အသည်းရောဂါရှိသူတွေမှာတော့ ဆရာဝန်နှင့်ပြသပြီးမှသောက်သင့်ပါတယ်)
-ပါရာစီတမောကို တစ်ရက်လျှင် (၄၀၀၀)မီလီဂရမ်ထက် ပိုမသောက်သင့်ပါဘူး၊အသည်းအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်လို့ပါ။
-၎င်းကိုတော့ အလွန်မပြင်းထန်သော ကိုက်ခဲနာကျင်မှုတွေမှာသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
-ဒီထဲကမှ ဥပမာအနေနဲ့ Ibuprofen ကို ၄၀၀(သို့)၆၀၀ မီလီဂရမ်ကို ၈နာရီခြားတစ်ကြိမ်သောက်နိုင်ပါတယ်။
-အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများဟာ နှလုံးရောဂါရှိသူတွေ၊ကျောက်ကပ်ပြဿနာရှိသူတွေနဲ့ ဆေးမတည့်တဲ့သူတွေမှာ ဘေးထွက်ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။
-၎င်းတို့ဟာ အစာအိမ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊အစာအိမ်အနာဖြစ်ခြင်းစသည့်ဆိုးကျိုးတွေလဲရှိတာကြောင့် အစာခံပြီးမှဆေးသောက်ရပါမယ်၊အစာမရှိလျှင် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး မသောက်သင့်ပါ။
-အထိုက်အလျောက်ပြင်းထန်တဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတွေမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။
-Opioid တွေဟာ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုကိုအတော်လေးကိုသက်သာစေနိုင်တဲ့ဆေးကောင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။
– ဆေးမှန်သမျှ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမကင်းတာကြောင့် သတိထား၍တော့ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
-Tramadol ကို တစ်ရက် ၅၀(သို့)၁၀၀ မီလီဂရမ်ကို (၆)နာရီခြားတစ်ခါသောက်နိုင်ပါတယ်။
-codeine ကိုလဲတစ်ရက်လျှင် ၃၀ မီလီဂရမ်ကို (၆)နာရီတစ်ခါသောက်နိုင်ပါတယ်။
-Oxycodone ဆိုတဲ့ဆေးကိုလဲ တစ်ရက်လျှင် ၁၀/၂၀ မီလီဂရမ်ကို ၁၂နာရီခြားသောက်နိုင်ပါတယ်။
-ဒါကြောင့်ဆရာဝန်မညွှန်ကြားပဲ ဝယ်ဖို့ကအလွန်ခက်ခဲတဲ့ဆေးတွေဖြစ်တာကြောင့် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှသာ သောက်သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆေးလေးတွေကတော့ ဆင်တုပ်ကွေးဖြစ်ပြီးကျန်ရစ်တဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေကို သက်သာစေနိုင်တဲ့ဆေးဝါးများပဲဖြစ်ပါတယ်။